St. Kitts & Nevis: Xad ma laha Tirada Rakaabka Doomaha
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Saint Kitts iyo Nevis Breaking News » St. Kitts & Nevis: Xad ma laha Tirada Rakaabka Doomaha
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caribbean • saaciday inay • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Wararka Raaxada • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Saint Kitts iyo Nevis Breaking News • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Hab -raacyada dalxiiska ee dib -u -bilaabashada dalxiiska dalxiiska ma xaddidayaan tirada rakaabka loo oggol yahay inay galaan Federaalka markab markab.
Bogga Royal Caribbean, oo ku taariikhaysan 2 -dii Agoosto, 2021 sax ma ahayn.
St. Kitts & Nevis waxay la shaqaynaysay dhammaan la -hawlgalayaasha safarada maraakiibta si loo fududeeyo soo -celinta guul -leh ee dalxiiska dalxiiska.
St. Kitts & Nevis ayaa maanta caddeeyay inaysan jirin wax xaddidaad ah oo ku aaddan tirada rakaabka ee geli kara Xiriirka markab dalxiis inta lagu gudajiro dib-u-furitaanka wajiga hadda ee waaxda dalxiiska dalxiiska.
The Royal Caribbean blog, taariikhdu markay ahayd 2 -dii Agoosto, 2021, oo sheegaya “St. Kitts ayaa dhowaan ku dhawaaqday siyaasad cusub oo u oggolaanaysa oo keliya martida 700 inay soo booqdaan jasiiradooda markab kasta. Soojiidashada Badaha ee socda 8 -da Ogosto ayaa hadda booqan doona Philipsburg, St. Maarten beddelkeeda, ”sax ma ahayn.
Wasiirka Dalxiiska, Gaadiidka iyo Dekedaha, Mudane Lindsay FP Grant ayaa xustay, “Qawaaniinta maraakiibta ee dib u bilaabashada dalxiiska dalxiiska ma xaddidayaan tirada rakaabka loo oggol yahay inay galaan Xiriirka markab dalxiis. Go'aanka Royal Caribbean ee Dalxiisyada Badaha ee ah inaan laga wicin dekedda St. Kitts markay ahayd 8-dii Ogosto, 2021 doonistoodu ma ahayn sababtuna waxay ahayd 700-qof oo rakaab ah oo awoodda ugu badan leh markabkiiba. ”
St. Kitts & Nevis ayaa la shaqaynaysay Royal Caribbean iyo dhammaan la -hawlgalayaasha khadadka safarka si loo fududeeyo soo -noqoshada guusha leh ee dalxiiska dalxiiska. Xiriirku wuxuu rajeynayaa inuu soo dhoweeyo Xeebta Baddaha iyo maraakiibta kale ee maraakiibta marka dib-u-furitaanku socdo.